Guddoomiye Baarlamaanka oo caddeeyay in muddo-xileedka Baarlamaanka uu dhammaaday balse uu jiro qodob Dastuuri ah oo qeexaya… – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo ka hadlayey madasha aragti wadaagga ee Heritage ayaa qeybta hore ee khudbadiisa kagag hadlay arrimaha doorashooyinka marka gaaro sannadkan 2025-ka.
Mudane ayaa ugu horreyn carabka ku dhuftay in sannado badan ay ku qaadato doorasho Qof iyo Cod ah dhammaan waddamada nidaamkooda doorasho uu ku saleysanyahay Qof iyo Cod, isaga oo xusay in madaxda Qaranka iyo madaxda dawlad-gobolleedyada ay leeyihiin doorka ugu muhiimsan ee qabashada doorashada.
Waxa uu xusay in 26-dii bishii September ee sanadkan Baarlamaanka Soomaaliya uu ansixyey heshiiskii siyaasadeed ee doorashada ee ay Muqdisho ku gaareen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada, kaas oo qeexaya habraaca iyo shuruucda loo marayo doorashada, maadaama la gaari waayey doorasho Qof iyo Cod ah.
“Madaxdii saxiixay heshiiska doorashada iyagaa looga fadhiyaa dalka inay doorasho ka qabtaan, iyagaa looga fadhiyaa inay la fariistaan oo ay qanciyaan ciddii tabasho qabta, heshiiska kuma qorna in cid cusub lagu soo daraa” ayuu yiri Guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal.
Dhinaca kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in Baarlamaanka dalka mudda xileedkiisii 4-ta sano ahaa uu dhammaaday 27-dii bishan, balse uu jiro qodob Dastuuri ah oo qeexaya inaan la oggolaanin firaaq Baarlamaani ah, sidaa darteed wali uu Baarlamaanku sii shaqaynayo isagoo leh awoodihiisii in hay’adaha dawladda uu kula xisaabtamo fulinta sharciga.